Trump inuu ka tago Washington waxyar uun ka hor inta Biden la dhaarin | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Trump inuu ka tago Washington waxyar uun ka hor inta Biden la...
Trump inuu ka tago Washington waxyar uun ka hor inta Biden la dhaarin
Madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Mareykanka ayaa ka tagaya magaalada subaxa Maalinta Caleemo Saarka ka dib markii uu ka fiirsaday inuu tago maalin ka hor.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadda qorsheynaya inuu ka tago Washington subaxa Maalinta Caleema-saarka Arbacada soo socota ka dib markii uu ka fiirsaday safarka Talaadada, ilo xog ogaal ah ayaa sheegay Jimcihii, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters.
Waxaa loo diri doonaa xaflad bixitaan oo ka dhici doonta Joint Base Andrews, ayuu yiri qof aqoon u leh qorshaynta oo la hadlay wakaalada wararka ee AP isagoo ka codsanaya magiciisa sababtoo ah qorshayaasha Trump si rasmi ah looma shaacin. Saraakiisha ayaa ka fikiraya dhacdo faahfaahsan oo yeelan doonta dareen booqasho booqasho, iyadoo roogga cas, midabka ilaalada, kooxda millatariga iyo salaan 21-qoryo dhammaantood laga wada hadlayo.
Trump ayaa wajahaya iska caabin ka imaaneysa deris-nimada madaxweynaha Florida ka dib Trump ayaa la ceyriyay. Maxaa dhacaya hadda? Yuu yahay yaa ku jira Tartanka Trump: Iyagu ma waxay yihiin mustaqbalka Jamhuuriyadda? Lady Gaga ayaa u heesaysa heesta, J-Lo si ay ugu muujiso xafladda caleemo saarka Biden
Trump, oo horey u shaaciyey qorshihiisa inuusan ka qeyb galeynin caleema-saarka Madaxweynaha la doortay Joe Biden, ayaa kadib u duuli doona Palm Beach, Florida, si uu uga bilaabo jagadiisa madaxweynenimo Mar-a-Lago Club, sida ay ilo-wareedku u sheegeen Reuters.
Trump ayaa noqon doona madaxweynihii ugu horreeyay ee ka booda xafladda caleema-saarkiisa tan iyo markii uu madaxweyne Andrew Johnson diiday inuu ka qeyb galo xafladda Ulysses S Grant xafladda dhaarinta ee 1869. Madaxweyne kuxigeenka Mike Pence ayaa ka qeyb gali doona booska Trump.
Trump wuxuu jebiyey dhaqan kale asagoon si rasmi ah u aqbalin doorashada Biden, isagoo noqdey kii ugu horeeyey ee aan bixin wax tanaasul ah tan iyo markii dhaqankii madaxweynenimada uu bilaabmay 1896. Madaxweynuhu ma uusan soo gaarin Biden ama kuma casuumin Aqalka Cad kulan ay isugu yimaadeen ka hor dhaaranaya sida dad badan oo kale taariikhda ugu dhow.
Pence, dhankiisa, wuxuu lahadlay madaxweyne kuxigeenka la doortay Kamala Harris khamiistii, wakaaladaha wararka ee Associated Press ayaa soo wariyay, iyagoo soo xiganaya laba qof oo aqoon u leh wada hadalka.
Waa xiriirkii ugu horreeyay ee la ogaa ee ka dhexeeya xubnaha la soo doortay ee maamullada xilka ka degaya iyo kuwa imanaya.
Mid ka mid ah dadka aqoonta u lahaa wada hadalka galabnimadii Khamiista ayaa ku tilmaamay “wacitaan wanaagsan,” iyadoo Pence uu u hambalyeeyay beddelkiisa isla markaana uu caawimaad ka helay. Waxay kuhadleen shuruudo aan la aqoonsan si ay u sharaxaan wada hadalka gaarka ah.
Trump ayaa ka tagi doona Washington ka dib bilooyin uu ku qaatay eedeymo aan sal iyo raad lahayn oo ku saabsan musuqmaasuqa codbixiyeyaasha isagoo isku dayaya inuu sharciyeeyo madaxweynenimada Biden iyo labo toddobaad ka dib markii uu kiciyay kacdoon rabshado wata, iyadoo taageerayaashiisa ay weerareen dhismaha Capitol ee Mareykanka iyagoo isku dayaya inay joojiyaan ku-meel-gaarnimada awoodda.
Trump ayaa la filayaa inuu ku sii nagaado Florida isaga iyo koox yar oo kaaliyayaashiisa ah madaama uu mustaqbalkiisa murugsan yahay.
Qaar ka mid ah la-taliyeyaasha Aqalka Cad ayaa ku boorrinayey madaxweynaha Jamhuuriyadda inuu martigeliyo Biden kulanka Aqalka Cad ka hor Maalinta Caleema-saarka, laakiin ma muuqato wax calaamado ah oo Trump uu ku doonayo inuu sameeyo, ayuu yiri sarkaal maamul.
Trump, oo ah madaxweynaha kaliya ee taariikhda Mareykanka ee labo jeer xilka laga qaado, ayaa qorsheynaya inuu soo saaro cafis badan inta uusan bixin. Ilo wareedyo ayaa sheegaya inuu ka fiirsanayay ikhtiyaarka aan horay loo arag ee ah inuu is cafiyo.
Previous articleTrump to leave Washington just before Biden is sworn in
Next articleNigeria warns against fake COVID vaccines
Ciidamada Booliska Soomaaliyeed ayaa aroortii hore saakay hawlgal burburin ah ku bilaabay dhismaha dugsiga Hoyga Xamar ee ku yaalla dagmada Hodan, gaar ahaan agagaarka...
Cali Yaroow hadaa Cadaalad u Raadisid Dhagajuun Xamdi...